Faahfaahinta Mashruuca Xariga Sapanca ee Sababay Falcelinta | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara54 SakaryaDhammaan faahfaahinta ku saabsan Mashruuca Baabuurka Gawaarida Sapanca
Dhammaan faahfaahinta ku saabsan Mashruuca Baabuurka Gawaarida Sapanca
10 / 12 / 2019 54 Sakarya, GUUD, Gondola, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY, TELPHER
Dhammaan faahfaahinta ku saabsan mashruuca gawaarida fiilada ee Sapanca
Mashruuca dariiqa, oo laga fulin doono degmada Sapanca, ayaa ajandaha la imanaya iyada oo laga jawaabayo shaqada. Marka waa maxay mashruuca xariga xariiqda ee Sapanca oo sababa jawaab celin?
Laga bilaabo Kırkpınar ee degmada Sapanca, 1,5 wuxuu gaari doonaa Mahmudiye dhamaadka khadka. Mashruuca gawaarida gawaarida ee Sapanca wuxuu la imaanayaa war ku saabsan fal-celinta muwaadiniinta dhowaan.
Sidee mashruuca gawaarida fiilada ee Sapanca u yimid maalmahan? Halkan waxaa laga helayaa dhammaan faahfaahinta ku saabsan wixii la soo dhaafay iyo kan hadda socda ee mashruuca xarig-jarka, kaasoo ah bilow aad u muhiim ah marka loo eego dalxiiska Sapanca illaa sanadkii ugu horreeyay ee mashruuca, 2018.
Gawaarida fiilada, oo ka bilaabmi doonta Kırkpınar, oo ka mid ah xarumaha dalxiiska ee ugu muhiimsan Sapanca, waxay leedahay dherer dherer ahaan kiiloomitir 1,5 waxaana la cadeeyay in kaliya geedaha u dhigma meesha ay ku dhegan yihiin xargaha gawaarida fiilooyinka la goyn doono. Si kastaba ha noqotee, tirada geedahan ku jira mashruuca sida lagu sheegay dadweynaha ma ahan kun 3 yiri. Marka loo eego mashruuca, khadka waxaa loo bixin doonaa si uu u gaaro saldhiga ugu sareeya geedaha iyada oo aan waxyeello loo geysan geedaha jira.Mitirka 700 wuxuu noqon doonaa farqiga u dhexeeya dhererka u dhexeeya saldhiga koowaad iyo saldhiga ugu dambeeya, wuxuuna soo bandhigi doonaa aragtida aan la xakameyn ee Sapanca marka ay soo gaarto Mahmudiye. Mahmudiye Incebel meesha, kaas oo soo afjari doona khadka gawaarida fiilada ee laga dhisi doono saldhiga guud ee ay leedahay xarunta loo qoondeeyay tirada guud ee kaymaha 72 ayaa lagu dhammeyn doonaa iyadoo la jarayo xarunta sare.
ATV, BUNGALOW iyo NATURE TOURISM
Heerka Mahmudiye ee mashruuca gawaarida fiilada ayaa noqon doona xaflad dabiici ah. Dalxiisayaasha maxalliga ah iyo kuwa ajnabiga ah ee ka raaci doona KNNXX fiilada gawaarida ee Kırkpınar ayaa ku raaxeysan doona dabeecadda kafeega, maqaayadaha, meelaha lagu lugeeyo, aagagga jardiinooyinka, jardiinooyinka lagu xiiseeyo dhallinyarada iyo waayeelka gobolka Mahmudiye. Aagga ayaa lagu fidin doonaa aagga 1,5 acre sidoo kale wuxuu waqti fiican ku qaadan doonaa ATV iyo nashaadaadyo isboorti oo kala duwan.Waxaa sidoo kale jiri doona guryo googooyo oo loogu talagalay in lagu dego gobolka, taas oo ah mashruuca gawaarida fiilada korantada ayaa si weyn u siin doona dalxiiska dabiiciga ah ee gobolka.
MA JIRO MASHRUUCKA SAACADKA MAAMULKA
Faahfaahinta ugu muhiimsan ee mashruuca ayaa ah inay la jaanqaadi karto dabeecadda, oo ka soo horjeedda waxa ay dadka u yaqaanaan Sapanca, oo aan siin dib-u-dhiska warshadaha, waxay u adeegi doontaa duurka dalxiiska dabiiciga ah, ujeedadeedu tahay inay bixiso ilaalin tayo leh oo dabiiciga ah halkii ay dhaawaceyn dabeecadda.
Miyay waxyeelayn doontaa dabeecadda?
Wajiyada mashruucan dhexdeeda, geedo badan ayaa dib loogu qori doonaa gobolka. Mashruucu wuxuu hiigsanayaa inuu ilaaliyo yaabkan dabiiciga ah isagoo xaqiiqsanaya nooca gaarka ah ee Sapanca ee loogu talagalay dalxiisayaasha gudaha iyo shisheeyaha ah. Samee Mashruuca Ku Shaqeynta Mashruuca waxaa lagu hirgalin doonaa nooca gobolka 25 ka dib sanadka uu ku sii nagaan doono Degmada Sapanca.
DIYAARINTA DHISMAHA EE DIYAARINTA
Aydın Yılmazer, Duqa Magaalada Sapanca ee mudada diyaarinaya mashruucan, ayaa sheegay inay tixgalinayaan dareenka gobolka hirgelinta inta ay diyaarinayaan mashruucan wuxuuna yidhi soo socda mashruuca.
Uz Waxaan taxaddar weyn gelinnaa si aan u hubinno in unugyada hadda jira aysan u sii darin. Ma jiraan wax qalab ah oo saameeya caafimaadka aadanaha inta mashruucu socdo. Maaddaama matoorrada korantada yihiin, ma abuuri doonaan saameyn xun deegaanka. Qandaraaska aan la galnay shirkadda guuleysatay, waxaan galnay walxo si gaar ah u tixgelinaya deegaanka. Si kale haddii loo dhigo, dhammaan faahfaahinta aan soo sheegay waxaa sidoo kale lagu soo daray heshiiska. Haddaanu nahay dawladda hoose, waxaan ku faraxsanahay inaan keenno mashruuca xarig-jarista ilaa Sapanca, oo noqon doonta midda ugu horreysa magaaladeena, halkaas oo aan tixgelinno faahfaahinta oo dhan. "
WAA MAXAY KU SAMEEYAA SAPANCA?
Thanks to gaadhiga fiilada ee la dhisay, iibku wuxuu kusii kordhayaa iyada oo dalxiisayaasha maxalliga ah iyo kuwa ajaanibta ahba ay ka imaanayaan ganacsatada gobolka Kırkpınar halkaas oo xarun-hoosaadku ku yaal. Dalxiisayaasha xilligan ay galaan hoteellada xiddigtu laga soo bilaabo xilligan oo ay arkaan dhammaan baahiyaha hudheelka, ma jiraan wax ku soo noqda oo xirfadleyaal ah, laakiin mashruuca jidadka, booqdeyaashani waxay ka bixi doonaan meheradaha hoteellada iyada oo ganacsiyada Sapanca aysan ahayn wax khatar ah maxaa yeelay daqliga kale ee gobolka ayaan ahayn mid aad u daran beeraha. Dareen ahaan, waxay abuuri doontaa shaqo.
SIDEE AYAAN SAXIIX UGU DIIWAANKA KHARAFKA SAPANCAYA?
Marka mashruucu si buuxda u shaqeynayo, awoodda dalxiiska ee Sapanca waxaa loo qorsheeyay in lagu kordhiyo waqtiyada 2 ama 3. Sapanca waxay noqon doontaa gobol aan xilli dhiman ku jirin waaxda dalxiiska.
Mashruucu wuxuu bilaabay inuu dhaafo nolosha mashruuca, gaar ahaan ka dib markii iska caabintii dadka reer Kırkpınar ay muujiyeen iska caabin weyn oo mashruuca ah. (Medyab waa)
Faahfaahinta oo dhan ayaa ka walaacsan Gawaarida Guryaha TOGG
Warka sheegaya in Alanya laga saaray Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ayaa ka falcelinaya…
Burburka ku yiil Bursa ayaa sababay falcelin
Duqa Yüce Spoke ee Mashruuca Sapanca Cable Car
Si loogu isticmaalo dhismaha YHT, Maqnaanshaha Maqnaanshaha
Kordhinta aamusnaanta gaadiidka ee magaalada Bursa waxay sababtay falcelin
Mashruuca Faafinta Gaarka ah ee Muhiimka ah ee Marmaray (Video)
3. wargayska EIA-da ayaa leh faahfaahin xiiso leh
Faahfaahin dheeraad ah ayaa laga soo xigtay Yavuz Sultan Selim Bridge
Uysal oo ka hadlay go'aankii UKO ee UBER
Sababta Isbedelka YHT ee Dogancay-Sapanca
KARDEMİR wuxuu soo saari karaa dhammaan biraha loo baahan yahay TCDD
2 3 Sanadka Xabsiga 4
Markaad ka baxdo Alsancak, derbiga TCDD, oo keena inuu ku dhaco hal waddo, waa la dumaa
Dulmiga oo sababay Shilalka Batman
Mashruuca gawaarida korontada ee Kırkpınar
Mashruuca Baabuurta Sapanca
Dhammaan faahfaahinta ku saabsan Mashruuca Gawaarida Dallada ee Sapanca
Darawalka Bilaashka ah iyo Tareenka Bilaashka ah ee Shiinaha